စိတ် ကူုး ထဲ က “သူ” ( ၃ ) ဇတ်သိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စိတ် ကူုး ထဲ က “သူ” ( ၃ ) ဇတ်သိမ်း
စိတ် ကူုး ထဲ က “သူ” ( ၃ ) ဇတ်သိမ်း
Posted by aye.kk on Oct 6, 2012 in My Dear Diary |7comments
မှာ ထား တဲ့ စား စ ရာ တွေ အား လုံး ပြည့် စုံ နေ ပြီ မို့ ။ ခဲ အို က ဘီ ယာ ဖန် ခွက် ကို လက် နဲ့ မြောက် ကိုင် တင် ရင်း ။ စ တင် နှုတ် ဆက် ခြင်း ပြု လုပ် လိုက် ပါ တယ် ။ ကျ မ က ကိုယ် သောက် တဲ့ အ အေး ဖန် ခွက် လေး မ ပြီး ၊ သူ သောက် မဲ့ ဖန် ခွက် နဲ့ ဖန် ခွက် နှုတ် ခမ်း ချင်း တိုက် ပြီး နှုတ် ဆက် ရ မှာ ကို ။ မ ဆက် ချင် သ လို လက် က တွန့် နေ မိ ပါ တယ် ။ စိတ် ထဲ မှာ ရှက် သ လို ဖြစ် နေ ပါ တယ် ။ လျင် မြန် သွက် လက် တဲ့ “သူ” က တော့ အ မြန် ထ ပြီး ၊ ကျ မ ဘေး နား မှာ ချ ထား တဲ့ ဖန် ခွက် လေး ကို မ ယူ ပြီး သူ သောက် မဲ့ ဖန် ခွက် နဲ့ တိုက် ပြီး ။ ပြန် ထိုင် လိုက် ပါ တယ် ။
ခဲ အို က တော့ ငါ့ ခယ် မ က တော သူ ကွ ။ ငါ တို့ လို မြို့ ကြီး သား မ ဟုတ် တော့ ဂွ ကျ တယ် ကွ ။ ပါ တီ ဧည့် ခံ ပွဲ တွေ လို မျိုး ခေါ် သွား လို့ ရ မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။ အ ရှက် ကွဲ ခံ ရ နိုင် တယ် လို့ သူ့ ကို ပြော ပြ နေ ပါ တယ် ။ သူ့ အစ် မ က ရန် ကုန် မှာ ။ ဘော် ဒါ အ ဆောင် နဲ့ လာ နေ ဘူး တဲ့ အ ပြင် ၊ ပိုက် ဆံ လည်း သုံး နိုင် တော့ ငါ့ ထက် ခေတ် အ မှီ လွန် နေ တယ် ။ အဲ ဒါ သူ တို့ ညီ အစ် မ နှစ် ယောက် ရဲ့ ။ မ တူ တဲ့ စ ရိုက် ပဲ ကွ လို့။ ဆို ပြီး သူ့ ကို ရှင်း ပြ နေ ပါ တယ် ။ စား ပွဲ ၀ိုင်း ပေါ် က ဟင်း လျာ အ ချို့အား ။ တို့ထိ ယုံ လောက် တူ နဲ့ ညှပ် ယူ ပြီး အ ရ သာ မြီး ကြည့် မိ ရင်း….. ။ စိတ် အ တွေး က ခေ တ္တ ခ ဏ လွင့် ပြန့် သွား ပါ တယ်။
ခဲ အို က တော့ ယ္ခင် က ။ အင်း ယား လိတ် ဟို တယ် က ကျောက် မျက် အ ရောင်း ဌာ န မှာ လုပ် ဘူး တဲ့ သူ မို့။ ဒို မီ နို အ က တွေ ၊ ရုပ် ရှင် မင်း သ္မီး တွေ နဲ့ တွဲ က ဘူး တဲ့ အ ပြင် ။ ပါ တီ ပွဲ တွေ ကို ပါ ရိုး အီ နေ တဲ့ သူ ပါ ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် နဲ့ ခေတ် အ မှီ လွန် တာ ခြင်း က တော့ လိုက် ဖက် ပါ တယ် ။ ရန် ကုန် မှာ ခဲ အို နဲ့ တစ် ခါ ဆုံ စဉ် တုံး က။ ခဲ အို က သူ ငယ် ချင်း မိန်း က လေး တစ် ယောက် အိမ် ကို အ လည် ခေါ် သွား ပြီး မိတ် ဆက် ပေး ခဲ့ ဘူး ပါ တယ် ။ ခေတ် အ မှီ လွန် နေ တာ က တော့ ။ ယောက် ကျား လေး တ ယောက် မြင် ရ သူ ရင် ဖို စေ ရ လောက် ပါ တယ် ။ ကျ မ က တော့ ခဲ အို ရဲ့ သူ ငယ် ချင်း မိန်း ခ လေး ကို တွေ့တွေ့ ခြင်း အ လွန် အ မင်း အံ့ သြ တ ကြီး ဖြစ် မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။
ပါး လွာ တဲ့ ည ၀တ် ဂါ ၀န် လို မျိုး မှာ ။ ဘာ အ ခု အ ခံ မှ အ ကာ ကွယ် ယူ ထား ခြင်း မ ရှိ ပါ ဘဲ ။ ပ က တိ အ တိုင်း သား လှမ်း မြင် လိုက် ရ တာ ကို ပါ ။ ကျ မ က ခဲ အို အ နား ကို အ သာ လေး ကပ် ပြီး ။ တိုး တိုး လေး ပြော ပြီး ။ အဲ ဒီ မိန်း ခ လေး အ မြင် ကွယ် တဲ့ နေ ရာ မှာ ။ မိန်း မ ကောင်း ရော ဟုတ် ရဲ့ လား လို့မ နေ နိုင် ဘဲ မေး ယူ ခဲ့ မိ ရ ပါ တယ် ။
သူ့ ခ န္ဓာ ကိုယ် အ လှ က အ ထင်း သား…။ ကျ မ က မ နေ နိုင် တော့ ။ ခဲ အို ကို သူ့ အ လှ မှာ ယစ် မူး မ သွား ဘူး လား လို့မေး လိုက် မိ ပါ တယ်။ ခဲ အို က….ငါ့ ညီ မ တို့ တော သူ က အ ရမ်း ရိုး အ တာ ကိုး ။ ဒါ မျိုး က မ ဆန်း ဘူး ရိုး နေ ပြီ ။ သူ က အ ရာ ရှိ တစ် ဦး ရဲ့ သ္မီး ။ ကြီး ကြီး မာ စ တာ ထဲ က ။ ဆို ရှယ် ကျ ကျ ၀တ် စား နေ ထိုင် တတ် တာ ။ အ ကျင့် ဖြစ် နေ လို့ ပါ ။ ဟိုက် စ ကူး တုံး ထဲ က ။ အ တူ တူ ကျောင်း တက် လာ တဲ့ ငယ် သူ ငယ် ချင်း မိန်း ခ လေး ပါ ဘဲ ။ အ ရင် က သူ့ ကို နှ မ လေး လို မြင် မိ လို့ ။ ဒီ လို မ ၀တ် စား ဘို့ ပြော သေး တယ် ။ သူ က ဂ ရု တောင် မ စိုက် ဘူး ။ ကာ ရိုက် တာ က တော့ ကောင်း ပါ တယ် ။ ယောက် ကျား လေး တွေ အား လုံး ကို ။ သူ ငယ် ချင်း လို ဘဲ ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ တယ် ။ သူ့ အ ဖေ အ ရှိန် အ ၀ါ နဲ့ သူ့ ကို တော့ ဘယ် သူ မှ မ ထိ ရဲ ကြ ပါ ဘူး ။
ငါ က သူ့ကို စိတ် မ ၀င် စား ပါ ဘူး ။ ငါ က ဘာ မှ လည်း မ ဖြစ် ဘူး ။ ဖြစ် ရင် နင့် အစ် မ နဲ့ မ တွေ့ ခင် က တည်း က ညား ပြီ ပေါ့ ။ ရည်း စား အ ဖြစ် တောင် စိတ် မ ကူး ခဲ့ မိ ဘူး ။ ဆို သည့် စ ကား များ ….။ ခဲ အို ထံ မှ ကြား လိုက် ရ တော့ ။ ကျ မ စိတ် ထဲ မှာ ။ ဘု ရား ဘု ရား ဟု တမ်း တ မိ ပြီး ။ နှုတ် က …သြော်…. သြော် ဟု သာ ။ ရေ ရွတ် ယင်း သက် ပျင်း တ ချက် ချ မိ ပါ တယ် ။
ခဲ အို တို့မြို့ ကြီး သား တွေ က ။ ဒီ လို နေ ။ ဒီ လို ထိုင် ။ ဒီ လို ၀တ် စား တာ တွေ ကို ။ ခု မှ န ဖူး တွေ့ဒူး တွေ့။ တွေ့ ဘူး မြင် ဘူး တော့ တယ် ။ ဘာ မှ မ ဖြစ် ဘူး လို့ ပြော တဲ့ ခဲ အို ကို လည်း ။ ဘယ် လို နား လည် ရ မှန်း မ သိ ။ မြို့ကြီး သား တွေ ဆို တဲ့ လက် သုံး စ ကား ။ လျှာ ဖျား က မ ချ တဲ့ ခဲ အို ။ ခေတ် ဆန်း လွန်း တဲ့ ကျ မ ရဲ့ အစ် မ ဖြစ် သူ ။ မ ကြီး ကျယ် တို့ တွေ့မှ တွေ့ တတ် ပါ ပေ တယ် ဟု စိတ် ထဲ စဉ်း စား ရင်း…။
ခဲ အို က…. ဟဲ့ ညီ မ လေး ။ နင့် ဖန် ခွက် ထဲ က ရေ ခဲ တုံး တွေ အ ရည် ပျော် ကုန် နေ ပြီ ။ ချီး ယား စ် လည်း မ လုပ် ခိုင်း ပါ ဘူး ။ သောက် လိုက် အုံး လို့ လှမ်း ပြော လိုက် မှ သာ ။ အ သိ ပြန် ၀င် လို့ ။ ကျ မ က အ အေး ခန် ခွက် ကို လက် နဲ့ လှမ်း ယူ ကိုင် ယင်း ။ တစ် ငုံ နှစ် ငုံ သောက် လိုက် ပြီး ။ ၀ဲ ယာ ဘေး ဘီ ကို ကြည့် မိ လိုက် ပါ တယ် ။ ခဲ အို နဲ့အစ် မ က စိမ် ပြေ န ပြေ ဘီ ယာ သောက် ။ စား ပွဲ ပေါ် ချ ထား တဲ့ ဟင်း လျာ တွေ ကို ဇွန်း ခ ရင်း နဲ့ ခပ် ယူ စား နေ ပြီး ။ စ ကား တ ပြော ပြော ရှိ နေ ကြ ပါ တယ် ။ သူ က တော့ မ လှုပ် မ ယှက် ကျောက် ဆစ် ရုပ် နှယ် ပါ ။ အ အေး ဖန် ခွက် ကို လက် နဲ့ ကိုင် ပြီး အ သာ အ ယာ လှဲ့ က စား နေ တာ တွေ့ ပါ တယ် ။ သူ နဲ့ မျက် လုံး ချင်း ဆုံ မိ ချိန် မှာ ။ ကျ မ က အ ကြည့် လွဲ ပြီး ။ သူ သောက် တဲ့ လိ မ္မော် ရည် အ အေး ဖန် ခွက် ကို ကြည့် လိုက် တော့ ။ လိ မ္မော် အ ချို ရည် က ကုန် လု ဆဲ နီး ပါး ဖြစ် နေ တာ မြင် လိုက် ရ ပါ တယ် ။။
စား ပွဲ ထိုး က မ လှမ်း မ ကမ်း နား မှာ ရပ် နေ ပြီး အ ရိပ် အ ကဲ ကြည့် နေ တာ မြင် တော့ ။ စား ပွဲ ထိုး အား မေး ငေါ့ ပြ လိုက် မိ ပါ တယ် ။ စား ပွဲ ထိုး က အ နား ရောက် လာ ပြီး ။ သူ သောက် နေ တဲ့ အ အေး ဖန် ခွက် ထဲ ကို ။ လိ မ္မော် အ ချို ရည် အ အေး ထပ် ဖြည့် ပေး ပါ တယ် ။
ကျ မ ရဲ့ အစ် မ မ ကြီး ကျယ် က ။ နောက် တစ် ခါ နင့် ကို ဟို တယ် မှာ ခေါ် လာ ပြီး လာ မ ကျွး တော့ ဘူး ။ စား စေ ချင် လို့ ခေါ် ကျွေး တာ ။ ဘာ မှ မ စား ပဲ နေ နေ တယ် ။ ကျွေး ရ တာ မ တန် ဘူး ။ ပိုက် ဆံ တွေ အ များ ကြီး ကုန် ပြီး အ လ ကား ဖြစ် တယ် လို့ပြော ပြီး ။ ကျ မ အ ပေါ် မှာ စိတ် ဆိုး ပြီး ကျွဲ မြီး တို နေ ပါ တယ် ။ အစ် မ ပြော လိုက် တာ ကို ခဲ အို က ကြား တော့ ။ ငါ့ ခယ် မ က ရှက် နေ တာ လား ။ အိမ် မှာ တော့ အ စား က ခပ် ပုတ် ပုတ် ။ တ စိမ်း ပါ လာ လို့ မ စား တာ များ လား ဟု ထင် မြင် တာ တွေ ကို ပြော ရင်း ။
သူ က တ စိမ်း လည်း မ ဟုတ် ဘူး ငါ့ ခယ် မ ရေ ။ ငယ် ငယ် တုံး ထဲ က ငါ့ တို့ တစ် အိမ် ထဲ မှာ အ တူ တူ နေ ခဲ့ ကြ တဲ့ ။ ညီ အစ် ကို တွေ ပါ ဘဲ ။ ညီ မ လေး ကို အ ရင် အ ခွင့် မ ကြုံ လို့ မိတ် ဆက် မ ထား ပေး မိ တာ ပါ ။ နောက် ပြီး စ ကား မ စပ် ဖြစ် တာ လည်း ပါ တယ် ။ အဲ လို မှန်း သိ ရင် ဒီ ကောင့် ကို ခေါ် မ လာ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ ခု တော့ လမ်း မှာ တွေ့ လိုက် လို့ ။ ဘယ် သွား မ လည်း မေး ရင်း နဲ့။ အ တူ တူ နေ ခဲ့ ဘူး တဲ့ ညီ အစ် ကို တွေ လည်း ဖြစ် နေ တာ ဆို တော့ ။ နေ့လည် စာ အ တူ လိုက် စား ဖို့ ခေါ် လာ လိုက် မိ တာ ။ လမ်း မှာ ကြုံ လို့ တိုက် ဆိုင် သွား တာ ပါ ။ မ ရည် ရွယ် ထား ဘဲ ဖြစ် သွား တာ ပါ လို့ ။ ခဲ အို က စိတ် ရှည် စွာ နဲ့ကျ မ ကို ရှင်း ပြ နေ ပါ တယ် ။
ကျ မ က တော့ ဘာ ရယ် လို့ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။ ကျ မ ရဲ့ နှာ သီး ဖျား ၀ နား မှာ ။ ဘီ ယာ အ နံ့ စီး က ရက် အ နံ့ တို့ ရ နေ ပြီး ။ အံ ချင် သ လို လို ဖြစ် နေ တော့ ။ စိတ် က စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘဲ ။ ဟင်း လျာ အ ချို့ ကို တို့ ထိ ယုံ သာ သာ တူ နဲ့ ညှပ် ပြီး မြီး ကြည့် ယုံ လုပ် နေ မိ ပါ တယ် ။ သူ တို့ ကြိုက် နှစ် သက် နေ တဲ့ အ နံ့ တွေ ကို ကျ မ က အံ ချင် မိ တယ် လို့ ထုတ် ပြော လိုက် ရင် ။ စား ပွဲ ပျက် မှာ စိုး လို့ အ သာ ငြိမ် နေ လိုက် ရ ပါ တယ် ။ တ စိမ်း ယောက် ကျား လေး ရှေ့ ။ ကိုယ့် ကို ချစ် ရေး ဆို ခံ ထား ရ တဲ့ သူ ရဲ့ ရှေ့ မှောက် ဆို တော့ ။ ရှက် စိတ် က လည်း တ ပိုင်း ၀င် နေ တာ လည်း ပါ ပါ တယ် ။
ခဲ အို က…..ကျ မ ရဲ့ အစ် မ ကို လည်း ။ ဆူ မ နေ ပါ နဲ့ကွာ ။ အေး က လည်း ကိုယ့် ညီ မ လေး အ ကြောင်း သိ ရက် သား နဲ့ ဘဲ ဟု ပြော လိုက် တော့ မှ သာ ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် က…. ဟို တယ် စား ပွဲ ထိုး အား လှမ်း ခေါ် လိုက် ပြီး ။ မ စား ရ သေး သည့် ဟင်း လျာ အ သစ် အ ချို့ အား ။ ပါ ဆယ် ထုတ် ပေး ဖို့ အ တွက် လှမ်း ပြော လိုက် ပါ တယ် ။ ကျ မ ကို လည်း ။ အ ဆောင် ရောက် ရင် ဗိုက် ဆာ နေ မှာ ။ မ စား ရ သေး တာ တွေ ကို ပါ ဆယ် ထုတ် ခိုင်း ထား တယ် ။ ယူ သွား လိုက် ။ အ ဆောင် ပြန် ရောက် ရင် သူ ငယ် ချင်း တွေ နဲ့ အ တူ တူ စား ။ ပါ ဆယ် ထုတ် ကို လက် က ကိုင် သွား ရ မှာ ကို လည်း ရှက် မ နေ နဲ့ ။ ဆို ပြီး ကျ မ ကို ပြော ဆို မှာ နေ ပါ တယ် ။ ခဲ အို ကို လည်း ။ ပြန် ဘို့ ရ ထား လက် မှတ် ယူ ထား တာ ။ ဘူ တာ ဆင်း ဘို့ အ ချိန် က နီး နေ ပြီ ဟု ပြော ဆို ပြီး ။ ကျ မ နေ တဲ့ အ ဆောင် ကို အ ရင် ပြန် လိုက် ပို့ ပေး ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။
အ ဆောင် ရောက် တော့ ရေ မိုး ချိုး ပြီး ။ အ ၀တ် အ စား လဲ လိုက် တော့ ။ စိတ် က လန်း ဆန်း သွား ပါ တယ် ။ ကု တင် ပေါ် အ နား ယူ လှဲ လျောင်း ပစ် လိုက် မိ ရင်း က။ အ လစ် မှာ ခိုး ရယ် ပြ လိုက် တဲ့ ။ သူ့ရုပ် လွှာ က မျက် ၀န်း မှာ မြင် လာ ပြန် ပါ တယ် ။ ဘာ မှ လည်း မ စဉ်း စား ချင် တော့ ဘဲ ။ မျက် စိ စုံ မှိတ် ခေါင်း အုံး ပေါ် မှောက် ပြီး ။ တ ရေး တ မော အိပ် ပစ် လိုက် မိ ပါ တယ် ။
သူ နဲ့ ကျ မ တို့ နှစ် ယောက်……………………။
မ တွေ့ ရ တဲ့ ရက် တွေ များ စွာ ကြာ သွား ပြန် ပါ တယ်။ ပုန်း သူ ကို တွေ့အောင် မ ရှာ နိုင် တဲ့ ။ သူ့ ကံ တ ရား ကြောင့် လို့ သာ ဆို ချင် မိ ပါ တယ် ။ တွေ့ နိုင် ဘို့ အ တွက် အ ခွင့် အ လမ်း မ ပေး ခဲ့ သူ က ကျ မ ပါ ။ သူ က တော့ ကျ မ ကို တွေ့ အောင် ရှာ နိုင် ဘို့ က မ လွယ် ကူ ပါ ဘူး ။ ချစ် တဲ့ စိတ် က သူ့ ကို နှိပ် စက် နေ မှာ ပါ ။ ကျ မ အ ပေါ် ဇွဲ န ဘဲ မ ထား နိုင် ရင် တော့ ။ သူ ကျ ရှုံး သွား နိုင် ပါ တယ် ။
ကျ မ …တ ယောက် သော သူ ကို အ ရမ်း ချစ် ခဲ့ ဘူး ပါ တယ် ။ အ ရမ်း လည်း ခံ စား ရ ဘူး ပါ တယ် ။ ဒီ သံ ယော စဉ် လှေ က လေး ။ ရေ လယ် ခေါင် မှာ နစ် မြုပ် ဘူး ပါ တယ် ။ သံ ယော စဉ် လှေ က လေး ။ ရက် ပျောက် ဆွမ်း သွတ် ထား တာ မှ မ ကြာ သေး တဲ့ ။ ကျ မ ဘ ၀ ထဲ ကို ၀င် လာ ဘို့ အ တွက် ။ ကျ မ ဘယ် သူ့ကို မှ ဖိတ် ခေါ် မ ထား ပါ ဘူး ။ ကျ မ နှ လုံး သား မှာ အ ချစ် ဆို တာ ။ လို အပ် တဲ့ ဟာ ကွက် တ ခု လို ကွက် လပ် ဖြစ် နေ ခဲ့ ပါ တယ် ။
မိန်း က လေး မို့ လို့ ။ အိမ် ထောင် ပြု ရ မယ် ဆို တဲ့ ကိ စ္စ မ လွဲ မ သေ ကြုံ လာ ရ မယ် ဆို တာ ။ ဘ ၀ ပေး အ သိ က နား လည် ထား ပါ တယ် ။ စိတ် ကူး ထဲ က “သူ” ကို ။ ဘ ၀ လက် တွဲ အ ဖော် အ ဖြစ် ။ စိတ် က ဆုံး ဖြတ် ထား မိ တာ ကို လည်း ၀န် ခံ ချင် မိ ပါ တယ် ။
စိတ် ကူး ထဲ က “သူ”က တော့ ။ ကျ မ အ လို ကျ ဖြစ် နိုင် ဘို့အ တွက် ။ စိတ် ဒဏ် ရာ ရှိ နေ တဲ့ ကျ မ အ တွက် ။ ကျ မ ရဲ့စိတ် အ လို ကျ ဖြစ် နိုင် ဖို့ အ တွက် ။ ပေး ဆပ် ရ မှာ ။ သူ့ ဘ ၀ တ ခု လုံး ပါ ဘဲ ။ ကျ မ က သူ့အ တွက် ရက် စက် တဲ့ သူ ဖြစ် မှန်း မ သိ ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ အ ရမ်း ကံ ဆိုး ပါ တယ် ။ ပိုင် ဆိုင် ချင် တဲ့ သူ့အ ချစ် က ။ သူ့ ကံ တ ရား က ။ မျက် နှာ သာ အ ပေး မ ခံ ရ တာ ။ ကံ ဆိုး တာ ပဲ လို့ကျ မ ထင် မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။
ကျ မ ဖြစ် စေ ချင် တဲ့ တောင်း ဆို မှု တွေ အ တော် များ များ က ။ သူ့ အ တွက် အ ခက် ခဲ ဖြစ် စေ တဲ့ အ ရာ များ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ။ သူ့ အ တွက် စိတ် ရော ကိုယ် ပါ ပင် ပန်း စေ နိုင် တဲ့ အ ကြောင်း အ ရာ မျိုး ဖြစ် ခဲ့ တာ တွေ ကို ပဲ ။ ကျ မ က အ မြဲ ရွေး ပြီး တောင်း ဆို နေ မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ့ ရဲ့ မေ တ္တာ တ ရား တုံ့ ပြန် မှု က ။ ကျ မ တောင်း ဆို တာ မှန် သ မျှ ကို ။ တ ခု မ ကျန် အ လုံး စုံ ဖြစ် အောင် လိုက် လျော လုပ် ပေး နိုင် ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ ရဲ့ စစ် မှန် တဲ့ ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ တ ရား ကြောင့် ဆို တာ ကို လည်း ။ ကျ မ အ ကြွင်း မဲ့ ယုံ ကြည် လာ မိ ပါ တယ် ။ သူ ရဲ့ ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ တ ရား ။ တန် ဘိုး မြင့် မား ကြီး မြတ် မှု ကြောင့် သာ ။ ဘာ မ ဆို ပေး ဆပ် နိုင် စွမ်း ရှိ ခဲ့ တာ လို့ ပဲ ။ ကျ မ သိ မြင် ခံ စား ခဲ့ မိ ရ ပါ တယ် ။
အ ချိန် ကာ လ ဘယ် ရွေ့ ဘယ် မျှ ။ သတ် မှတ် ချက် ဆို တဲ့ အ တိုင်း တာ ကာ လ တ ခု ဆို ပြီး ။ သူ့ ဆီ မှာ ရှိ မ နေ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ ကျ မ ဆီ က တုံ့ ပြန် မှု (၀ါ) အချစ် ။ ရ နိုင် ဘို့အ တွက် ကို ။ သူ မျှော် လင့် ချက် ထား ရှိ ထား တာ မို့ ။ စောင့် စား နိုင် တဲ့ သ တ္တိ ရှိ နေ ခဲ့ တဲ့ “သူ” မို့ ။ ကျ မ အ နေ နဲ့ အ ချစ် ဆို တဲ့ အ ရာ ဟာ ။ ရ ယူ ပိုင် ဆိုင် ချင် တဲ့ အ ရာ လို့နား လည် ခံ စား မိ ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။ ထောင့် ငါး ရာ ကိ လေ သာ မီး ဖြစ် နေ လို့သူ့အ တွက် တော့ ။ ပူ လောင် မြိုက် မယ် လို့ ထင် မိ ပါ တယ် ။
မေ တ္တာ တ ရား နဲ့ တော့ မ တူ ပါ ဘူး ။ ကွဲ ပြား ပါ တယ် ။ မေတ္တာ တ ရား က အေး မြ ပါ တယ် ။ သူ ပြော တဲ့ အ တိုင်း ။ သူ က တိ အ တိုင်း ။ ဆို ခဲ စေ မြဲ စေ ဆို တဲ့ အ တိုင်း ။ သူ့ သစ္စာ မ ဏ္ဍိုင် က ခိုင် ခိုင် မြဲ မြဲ ။ ဆယ် က မ္ဘာ တိုင် ထိ ။ ယုံ ကြည် နိုင် အောင် ။ သူ့ဘက် က တည် ဆောက် ထား တဲ့ အ တွက် ။ ကျ မ…..အ ရမ်း ကံ ကောင်း ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ့ ရဲ့ အ ချစ် က မိ သား စု ဆွေ မျိုး အ သိုင်း ၀ိုင်း ကြား မှာ ။ ထင် သာ မြင် သာ စေ နိုင် ခဲ့ လို့ ။ သူ ရဲ့ အ ချစ် ကို အား လုံး က လေး စား ခဲ့ ကြ ရ ပါ တယ် ။ ကျ မ ကို လည်း အ ရမ်း ကံ ကောင်း တဲ့ သူ လို့ ချီး မွမ်း ထော ပ နာ ပြု ခံ ရ ပါ တယ် ။
ကျ မ ကို လည်း သူ ဘယ် လောက် ချစ် တယ် ။ မြတ် နိုး တယ် ဆို တာ ။ မိုး မြေ အ မျှ မ က ။ ချစ် နေ တာ ကို ။ နှစ် ဖက် အ သိုင်း ၀ိုင်း တို့ က တိ တိ ကျ ကျ သိ ထား ကြ ပါ တယ် ။ ကျ မ က လည်း ။ ကျ မ ရဲ့ စိတ် တိုင်း ကျ ရွေး ချယ် ထား ရှိ ခဲ့ တဲ့ ။ စိတ် ကူး ထဲ က “သူ” မို့။ ကျ မ လက် ထပ် ရ မဲ့ သူ ဟာ ။ ဒီ က မ္ဘာ မှာ “သူ”က လွဲ ရင် ဖွဲ နဲ့ စ ကွဲ ပါ ဘဲ လို့ ။ ဘယ် သူ့ ကို မှ လက် ထပ် မှာ မ ဟုတ် ဘူး ဆို တာ ကို ။ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ များ ဆွေ မျိုး များ အ ကြား မှာ ။ အ တိ အ လင်း ကြေ ညာ မောင်း ခတ် ခဲ့ မိ လိုက် ရ ပါ တော့ တယ် ။။။။
ဒီစာလေးကို မေ့တောင်မေ့နေပြီ။ အန်တီအေးရေ အဲ့ဒီ စိတ်ကူးထဲက သူက အခု လက်ရှိသူပဲပေါ့။ အခုရော ခွဲစိတ်တာ အဆင်ပြေရဲ့လား။
မိသားစု အားလုံး ကျန်းမာပါစေ။
ဖတ်ရတာ ၀တောင်မ၀ဘူး…တီကေ…မြန်မြန်ဇာတ်သိမ်းသွားလို့…’ချစ်သော..ကေ’ လို
အပိုင်းတွေမျှော်လင့်ထားတာ..ချစ်သူတို့ဘ၀ကနေ ကြင်စဦးအထိလောက် ဖတ်ရရင်ကို
အချစ်တစ်ခုဟာ ပေးဆပ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်..ရယူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်… ပေးဆပ်သူ နဲ့
ရယူသူ လိုက်လျောညီထွေရှိသွားတဲ့အခါ လှပပြည့်စုံတဲ့အချစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်….
အန်တီကေ ပထမသူတစ်ယောက်က ဘယ်သူလဲ ။ သိချင်မိတယ်။ ဟီး
မုန်းစရာကောင်းသည့်ဦး ကိုပြန်ရှာဖတ်ကြည့် ။
ကြည်နူးဆွပ်ပျံ့ ဖွယ်လေးများ နောက်ထပ်မျှော်နေပါဦးမယ်
ချစ်ရသောသူနဲ့ အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ရခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး မဟုတ်ပါပေလား ဒေါ်လေးကေ ရဲ့ 
အန်တီလည်းအချိန်မရတာနဲ့ ကြာသွားလို့ အားနာမိပါတယ်ကွယ်။